IFM: nahaliana ny « Focus cinéma Japon » | NewsMada
IFM: nahaliana ny « Focus cinéma Japon »
Tontosa, ny asabotsy teo tetsy amin’ny Institut français de Madagascar (IFM) Analakely, ny andiany fahefatra amin’ny « Focus cinéma Japon ». Araka ny nambaran’ny mpikarakara, ny masoivoho japoney eto amintsika, nahitam-pahombiazana ny hetsika, nahavory olona maherin’ny 600.
Fotoana hampahafantarana ny vokatra horonantsary japoney ny « Focus cinéma Japon ». Tamin’ity andiany ity, miisa telo ny nasesy nalefa: ny “Mameshiba”, ny “Personne ne veille sur moi” ary ny “Pop in Q”. Nampiavaka ny tamin’ity ny fahasamihafan’ny sokajin’ireo horonantsary ireo: “dessin animé” na sarimiaina, tantaram-piainana, sns.
Ankoatra ny fandefasana “film”, nahafinaritra sy nahaliana ny mpanotrona ihany koa ireo karazana kolontsaina sy fomba amam-panao mampiavaka an-dry zareo Japoney. Anisan’izany ny “origami”, zavakanto vita amin’ny taratasy. Teo koa ny fanandramana na fanaovana “kimono”, sns. Antenaina ny hitohizan’ny hetsika toy itony.